Mapikisi epink anoratidza pachiratidziro kana uchibatanidza Mac Mini yako itsva kuburikidza neHDMI? Hausiwe wega | Ndinobva ku mac
Iko mapikisheni epingi anoratidza pachiratidziro kana uchibatanidza yako nyowani Mac Mini kuburikidza neHDMI? Hausiwe woga
Ignatius Room | | Mac Mini, Noticias
Kunze kwekunge uri a kutanga kutora, hazvina kumbofanokurudzirwa kutenga chizvarwa chekutangan yechigadzirwa chitsva, chigadzirwa chinotarisana nenhamba huru yezviitiko zvinonyangarika muzvizvarwa zvinotevera. Panyaya yeMac Mini nyowani, isu tinofanirwa kuwedzera chimwe chiitiko, chiitiko chinoratidza pink pixels kana uchibatanidza cheki kuburikidza neHDMI.
Sekureva kwevakomana veMacRumors, paReddit uye mumaforamu ekutsigira eApple, kune huwandu hukuru hwetambo dzavanoti mushure mekubatanidza cheki kuburikidza neHDMI yekubatanidza kuMac Mini neApple M1 processor, vanoonekwa pachiratidziri. pink pixels, dambudziko kubva ipapo Apple vakaziva kuburikidza nememorandamu zvemukati uye vari kutoshanda pakugadzirisa.
Aya mapixels haaonekwe kana uchibatanidza Mac Mini kuburikidza ne USB-C kana Thunberbolt port. Pavanenge vachibva kuApple vanoshanda pakugadzirisa dambudziko iri inopa mhinduro yechinguvana: Isai midziyo kuti izorore kwemaminitsi maviri. Wobva wamumutsa, dzima chiratidziro, uye shandura sarudzo muSystem Preferences.
Rimwe dambudziko regraphical
Este rakanga risiri dambudziko rekutanga rine chekuita nemifananidzo yeiyi modhi inofambiswa neApple's M1 processor, sezvo kana tikabatanidza iyo yekupedzisira-yakafara kana yepamusoro-soro-yakafara tarisisa, sarudzo dzekushandisa idzi modhi hazviratidzike, kunyangwe kubva kuApple vachiti vari kushanda kuti vape rutsigiro.
Zvichida Apple ichatanga diki update Kugadzirisa dambudziko iri, gadziriso inongove iripo kune aya mamodheru, kunze kwekunge wafunga kuisanganisira mune inotevera update yeMacOS Big Sur, kunyanya mu vhezheni 11.3, iyo yechipiri yeruzhinji beta yatovepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iko mapikisheni epingi anoratidza pachiratidziro kana uchibatanidza yako nyowani Mac Mini kuburikidza neHDMI? Hausiwe woga
Kuvuza kunoratidzira dhizaini yeAirPods 3 uye yayo yekuchaja bhokisi
Mwaka wechipiri weMythic Quest kutanga paMay 7